MG ရဲ့ model အသစ်ကလေး သူကြီးလက်ခံပေးပါ….(1) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » MG ရဲ့ model အသစ်ကလေး သူကြီးလက်ခံပေးပါ….(1)
MG ရဲ့ model အသစ်ကလေး သူကြီးလက်ခံပေးပါ….(1)
Posted by lone on Aug 19, 2011 in Celebrity, Entertainment, Photography, Style & Beauty | 55 comments
သူ့နမည်ကချောအိ … ဆေးကျောင်းသူလေးပါ…အသက်က ၂၀ ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား ရွာသားအပေါင်းတို့ဆီ MG ရဲ့ပင်တိုင်မော်ဒယ် အဖြစ်သူကြီးဆီလျှောက်လွှာတင်မလို့ပါ ။သူကြီးလက်ခံပါရဲ့လား…ဝေဖန်ပေးကြပါဦး ရွာသားအပေါင်းတို့ … နောက်ထပ်ပုံများလည်း ဆက်လက်တင်ပြပါဦးမည်… အဆင်ပြေရင်လက်ခုပ်သံလေးကြားချင်ပါတယ်….
If I wasaboy ....... !
View all posts by lone →
ကြောင်ကြီးကလက်ထပ်ချင်ပါတယ်…သဂျီးကိုပြီးရင် လက်ခံခိုင်ပါမယ်။ ဂျော်လကီအောင်ဘုကိုတော့ လက်ဖြတ်ပစ်ပါ…။
ကျန်သွားလို့ ကြောင်ကြီးက ၂၁နှစ်၊ ဆေးသမား။
နောက်ထပ်ပုံတွေတင်ရင် တကိုယ်လုံးပုံတင်ပေးပါနော်။ ကိုယ်တပိုင်းပြတ်ဆိုတော့ သရဲလား လူလား မသေချာလို့..။ ရာသီဥတုကလည်း ပူအိုက်စွတ်ဆိုနေတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး အဝတ်အစားလေးတွေနဲ့ပဲ ရွာထဲမှာ သင့်တော်ပါတယ်…။
ဦးကြောင်ကြီးကလည်း ဦးကြောင်ကြီးကလည်း ဘူးပြန်ပြီ အဲ ဆောရီး ရူးပြန်ပြီ … သရဲက ဓာတ်ပုံ
ရိုက်တတ်လို့လား … ဘာလဲ ဥစ္စာစောင့် မလေးနဲ့မှားသွားလို့လား … … ဟဲဟဲ … …ဟဲ …
လောလောဆယ် မျက်ပြူးလေးတွေကို လှတယ်ထင်နေလို့
သူက ကြေငြာသရုပ်ဆောင် အရမ်းဖြစ်ချင်တာ ချောလည်းချောတယ်။ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ သူ့ကိုတွေ့ရင် မချောဘူးလို့ပြောတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲ
မီးသူငယ်ချင်းက အရမ်းချောတယ် ။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ထက်ချောတယ်
Is it she ??? Pretty & cute ???
ဟုတ်ကဲ့ရှင့် lone ပြောတာသူ့ကိုပါ … …. ချောတယ်မဟုတ်လား ….
ပုံလေးတွေ နဲ့ တစ်ကွ သေချာ ပြလာတော့လည်း
တင်လိုသူ လေး ရဲ့ 
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား
ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအတိအကျ ၊ ကိုယ်တိုင် ကိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အတိအကျ
အရေးကြီးဆုံးကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးပေါ် ( ရှေ့ ၊နောက် ၊ဘေး ) ပုံလေးတွေ
အဲဒါတွေ အားလုံး ပါပေမှ
တို့ ဂေဇက်ဝင်တွေ အတွက် ပို ပြီးပြည့်စုံ မှာပေါ့
တို့ ရွာထဲ မှာ KING entertainment ရှိတယ်
တို့ ရွာကို ပေါ့သေးသေး တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ 
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ထပ်လည်း သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့တကွ ထပ်တင်ဦးမှာပါ ။ စောင့်ပြီး အားပေးဦးနော် … အခုလောလောဆယ်တော့ သူ့ပုံလေးတွေကို လက်ခံပါ့မလားဆိုပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တင်လိုက်တာပါ….
lone ရေ သူငယ်ချင်းမလေးက ချစ်စရာလေးပါ ချောလဲချောပါတယ်
သူဝါသနာပါရင် သူ့ပုံစံလေးဆို မဂ္ဂဇင်းတွေက သဘောကျမှာပါ …
ဓာတ်ပုံလေးတွေပေးပြီး လျှောက်ကြည့်ပါလား တစ်ချို့ မဂ္ဂဇင်းတွေက ပိုက်ဆံပေးရပင်မယ့်
ဟိုနေ့က နွယ်ပင်ပြောတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေကတော့ သဘောကျရင် Free ထည့်ပေးပါတယ် ….
လက်ခံပေးရမယ် ဟိဟိ နေအုံး အကြောင်းသိအောင် စုံစမ်းရအုံးမယ်လေ
ပြီးတော့ မေမေ့ကိုလဲ တိုင်ပင်ရအုံးမယ်ဗျ..
ချစ်ချာတော့ကောင်းတား… ဟိဟိ :P:P
ဒါပေမယ့် မော်ဒယ် အသစ်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ တိုးရလိမ့်မယ်..
ရွာထဲမှာလဲ ရွာသူ ရွက်ပုန်းသီးလေးတွေ ရှိတယ်လေ…..ဟဟဟ
ရွာထဲမှာ မကြာခင် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပပေးမဲ့ အလှူပွဲကြီး အတွက် ကွမ်းတောင် ပန်းတောင် ကိုင်ဖို့ စာရင်းသွားထားပေးမယ်နော်။
ကွမ်းတောင် ပန်းတောင် ကိုင်တယ် ဆိုတာ အနည်းဆုံး ၄ယောက် ရှိမှ ဆိုတော့.. နောက်ထပ် ၃ယောက်လိုသေးတယ်။
အလှူကတော့ သကြီး ကို ရှင်ပြုပေးပြီး ဘုန်းကြီး အပြီးဝတ်တဲ့ ပွဲ အပြင် တောကြီးထဲမှာ တပါးနေ ကျောင်းဆောက်ပြီး လှူဒါန်း ရေစက်ချတဲ့ပွဲ အတွက်ပါ။
အလှူငွေ တော်တော် များများလည်း လက်ခံရရှိထားပြီးပါပြီ။
မကြာခင် ထို အလှူပွဲကြီး ဖြစ်မြောက်တော့မှာမို့.. အလှူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကွမ်းတောင်ပန်းတောင် နဲ့ ဗန်းကိုင်များကို အကယ်ဒမီ ပေးပွဲကလိုပဲ ယူအက်စ် ရုပ်သံလိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ပေးပြီးတော့ သတင်းများကိုလည်း ရွာထဲမှာအချိန်နဲ့ တပြေးညီ ချက်ချင်း တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် ….ပုံတွေ တင်တာ သဘောမကျဘူး .. (နောက်တီးနောက်တောက်ကများလို့ … အထောက်ကူမပြုနိုင်မှန်းသိလို့ .. )
ဒီလို ပုံတွေတင်တာထက် .. တကယ့် ထုတ်လုပ်သူတွေ ၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေနဲ့ပိုဆက်သွယ်လျှင် ကောင်းပါလိမ့်မယ် … ။
ကင်း အန်တာ တိန့်မန့် အကြောင်းလေးလည်း နည်းနည်းလေ့လာ လိုက်ပါဦး …
မဆိုးပါဘူး… မော်ဒယ်လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်.. သူကြီးက ခန့်မယ်ဆိုရင်တော့ မဲပေးပါတယ် ခန့်ပါဗျာ မော်ဒယ်အဖြစ်.. ဒါနဲ့ သူကြီးမော်ဒယ်ဘွိုင်းအဖြစ်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း လျှောက်ထားချင်တယ်… လက်ခံပေးပါလား..အဟိ
သူငယ်ချင်းမလေး က သူ့ပုံကို ရွာထဲ တင်ခိုင်းတယ် ?
အနုပညာ ကို တော်တော် ၀ါသနာပါတဲ့သူလေး ဖြစ်မယ်
အနုပညာလောက ထဲရောက်ပြီး အောင်မြင်သွားရင် ထူးချွန်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက် လျော့သွားလို့
တိုင်းပြည်အတွက် (ဆေးကျောင်း လျှောက်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအောက်က ကျန်ခဲ့သူအတွက်) နာတာပေါ့
သူတင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှည်တင်မိတာပါ.. etone မမရေ နောက်ဆို မတင်တော့ ဘူး။ အကူညီရမလားအောက်မေ့ တယ် နောက်တီးနောက်တောက်တွေနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ သြော်သူကလည်း ဆရာဝန်ပဲလုပ်မှာပါ။ ၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့ သူက အနုပညာလောကထဲ မ၀င်ပါဘူး။ အပျော်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်တာပဲ ရှိတာပါ…
အခုလို တင်တော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်နိုင်ဘူးလား
သူနဲ့က ပြောမနာဆိုမနာတွေပါ။ ညီမတွေလို နေကြတာပါ…
ဒီလိုတင်လိုက်လို့ သူကလည်း စိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆိုဘယ်တော့မှမတင်တော့ပါဘူး။ MG ကရွာသားတွေကအပြစ်လောက်ပဲမြင်ကြတာပဲ…နောက်ဖို့လောက်ပဲသိတယ်…ပံ့ပိုးပေးမယ့်လူတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့အတွက် နောက်ဆိုဘယ်တော့မှမတင်တော့ပါကြောင်း..
အကောင်းဆုံးက သူခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တင်တာမကောင်းပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ။
တစ်ချို့ ကဒီပုံတွေကို မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချသွားရင် ။ ကာယကံရှင်အတွက်မကောင်းဖြစ် သွားပါလိမ့်မယ်။နောက် ညီမက စေတနာနဲ့တင်ပေးထာဆိုပေမဲ့ တစ်ချိန်ကြရင် ဝေဒနာ ဖြစ်ရင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနတ်လောကမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်တာ အမြင်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ သူလိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေသာ တင်လိုက်လို့ကတော့ ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
သူ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံနေစရာလိုလောက်တဲ့သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး… R Ga ပြောသလို MG မှာ မကောင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်မှန်းမသိလို့ တင်လိုက်မိပါကြောင်းကိုလည်းပြောပါရစေ…MG က သန့်ရှင်းပြီး လက်ခံပေးမယ့်လူများ ရှိမလားတင်လိုက်တာပါ… သူ့လိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ဒီထက်ပိုများတဲ့ ပုံတွေနဲ့ သူ့facebook မှာသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးသားပါ.
facebook ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိတဲ့ website ပါ။ ဒီwebsite မှာတောင်သူတင်ထားပြီးသားပဲ။ MG ရောက်မှသူ့ပုံကို မကောင်းတာလုပ်လိုက်ရင်တော့ နားဝင်ဆိုးစရာပဲ …. MG ကသန့်ရှင်းပြီး လူကြီးလူကောင်းပီသတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ လူတွေရှိမယ် ထင်လို့ဝေဖန်ခိုင်းရုံတင်ပြတာပါ…ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားတယ် ။တင်ပြီးမှမှားမှန်းသိတယ်….
ချစ်သုဝေ တို. ဖြူဖြူ ကျော်သိန်းတို. အားကျပြီး
အဟမ်း .. အဟမ်း … (စကားပြောခါနီး သုံးသော Method)
ကဲ ကဲ သူလေးက ဘူလေးတုန်း
အချောအလှလေးတွေဆိုရင်လည်း စောင်မ ကြည့်ရှုပေးရမှာပေါ့လေ …
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား – (ဥပမာ 32 – 26 – 35)
အရပ် (ပေ) –
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (ပေါင်) –
တစ်ကိုယ်လုံးပေါ်ပုံ (၃)ပုံ (အရှေ့၊ အနောက်၊ ဘေးဘက်မှ)
ကိုယ်လုံးတစ်ဝက်ပုံ (၃)ပုံ (မနက်အိပ်ယာထ၊ အပြင်သွား၊ အိပ်ယာဝင်ပုံများ)
ပုံများနှင့်အတူ ရုံးချိန်ပြင်ပအတွင်း လူကိုယ်တိုင် KING Entertainment သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ လျှောက်ထားသူသည် အပျိုစင်စစ် ဖြစ်ရပါမည်။
……… ဥက္ကဋ္ဌ ……….
“တစ်ကိုယ်လုံးပေါ်ပုံ (၃)ပုံ (အရှေ့၊ အနောက်၊ ဘေးဘက်မှ)”
ဥက္ကဋ္ဌ ရယ် မပေါ် ရင် မရဘူးလားဟင်!….ရှက်စရာ ကြီး
သူများတွေ တိကုန်ပါအုန်းမယ်ဂျ …..
ရွာထဲတင်ခိုင်းတာက ရွာထဲက ရွာသားတွေအကြောင်း မသိသေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သိသွားရင်တော့ တင်ခိုင်းမယ်မထင်ပါဘူး။
မော်ဒန်လုပ်ချင်ရင် စာပေတိုက်တွေမှာ မျက်နှာဖုံးအဖြစ် လျှောက်ရင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်ကွယ်။ ခုဆို ဂျာနယ်တွေလည်း မော်ဒန်ပုံတွေသုံးလာကြတာ များတော့ ပိုပြီးထိရောက်အောင်မြင်မယ့်နည်းလမ်းကို သုံးပါနော်…
သေချာကြည့်မိတော့မှပဲ… ကောင်မလေး ဇက်နည်းနည်းစောင်းနေတာကိုး
တခါတလေ အမြဲတမ်း ရွာသားတွေ ပျော်သွားတာပေါ့နော်..။ သူကြီးက တကယ်ရွေးချယ်ပြီး လက်ခံတော့မယ်ထင်ပါတယ်..။
သူကြီးရယ် လက်မခံပါနဲ့တော့ တော်ပြီ …. ထပ်မတင်တော့ဘူး….
ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ.. အလှပန်း/ ခေတ်စမ်းလုလင်ကဏ္ဍရှိတယ်…။
အခုနောက်ပိုင်းဆေးကျောင်းသူတချို့ … လွန်လွန်းလာတယ် ..၀တ်ပုံစားပုံ စကားပြောပုံက အစ လူလေးစားချင်စရာမကောင်းတော့ဘူး … ။(နောင်တချိန်မှာ လူ့အသက်ကယ်တဲ့ ပညာသင်နေတာ လေးလေးနက်နက် အာရုံမစိုက်ဘူး .. ၀တ်ချင် စားချင် လှချင်တာက ပထမဖြစ်နေတယ် ) .. ကြုံရင် ကြုံသလိုတော့ ပြောပါတယ် … ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက ကောင်မလေးတွေက ဒီလောက်မရဲတင်းဘူး ။ အခုနောက်ပိုင်း ဆတ်ကော့လက်ကော့တွေ များနေတယ် …ကျောင်းမှာလည်း မမြင်ချင်မှ အဆုံးပဲ ။
မမြင်ချင်မှအဆုံးဆိုတော့ လိုက်ကြည့်နေတာကိုး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေပါလား
ဆုပန်ထွာ နှာတံလေးနဲ့ တူုသလိုပဲ
မမလေးကို ခိုးမယ်လို. လူဆိုးတွေနဲ. မောင်တိုင်ပင် (ခိုးပြေးချင်သူများ ကျူပ်ရာဇ၀င်လူဆိုး ရှိတယ်..ခိုးပြေးဖို. ကူညီတဲ.နေရာမှာ ဆ၇ာတစ်ဆူ။ မှတ်ချက်.. ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော. မစွံသေးပါ..ကြော်ငြာ)
ရုပ်ချောချော မချောချော ၊ လှလှ မလှလှ၊ အသားမဲမဲ ဖြူဖြူ ၊ ပုပု ရှည်ရှည်၊ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ချစ်ရတဲ့မိန်းမသုံးယောက်ရှိတယ်……
ဆရာဝန်မ၊ နာစ့်မ နဲ့ ကျောင်းဆရာ မတွေပဲ ..ဒါပေမယ့် အိနြေ္ဒသိက္ခာ နဲ့မြန်မာဆန်ပြီး ရိုးသား ကြင်နာတတ်ပုံရှိမှ နော်….။
လုံးလုံး သူငယ်ချင်းက ချောတယ် ချစ်စရာကောင်းပါတယ် (cute)ဖြစ်တယ်.. ဆေးကျောင်းသူဆိုတော့ စာတော်တဲ့ အထဲပါတာပေါ့….
……….မြန်မာ မဆန်ဘူး ။ဗမာရုပ် (သို့) တိုင်းရင်းသားရုပ် မရှိဘူး၊ကိုရီးယား လိုပုံစံမျိုး ထွက်နေတယ်တူလားဆိုတော့ လဲမတူပြန်ဘူး.
……….သူများတွေက ကြည့်ပြီး တစ်စိမ့်စိမ့် ချစ်လာ အောင် ရိုးရိုးလေး နေရမယ့် အစား သူ့အကြည့်တွေက ညှို့နေတယ်….
……….အပြင်အဆင်နဲ့ အမူအယာ က တစ်ဘက်လူ စိတ်ဝင်စားအောင် တမင်လုပ်ယူထားတယ် (second last picture)..
……….သားကောင်းမိခင် ဖြစ်နှိုင်တဲ့ ပုံစံအချိုးအဆက် မရှိဘူး၊ မိမိ ချစ်သူနဲ့ ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက် ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ
ဒိုးတူဘောင်ဘက် ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်မယ် ဆိုတဲ့ ဒေါင်းတင်မောင်းတင် သတ္တိရှိမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး……
ဘမြင်တာကို ရင်ထဲက အတိုင်းပြောလိုက်တာပါ…(အဘရိုင်းပါတယ်)…..လွန်သွားတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းအတွက် …အဘကို စိတ်ဆိုးပါ…..
သားချစ်သူက သိပ်လှတာ.. အဲလို ဝေဖန်မှာ စိုးလို့ အဘကို မပြတော့ဘူး။
အလန်းရယ် ………သားချစ်သူ က လန်းမှာပါ…နောင် မဝေဖန်တော့ ပါဘူး…..
ရေးမိပြီးမှ စိတ်မကောင်းဘူး…..ကလေးတွေပျော်ကြတာပဲ တွေ့ချင်တာပါ..
အဘ က ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ယှဉ်မိ လို့ သတိလွတ်ဖြစ်သွားတယ်…….
တောင်တောရယ်သာ ဆိုတော့ ….မြောက်တော ကပဲ မှောင်သလိုလို မသာယာသလိုလို ဖြစ်သွားရတယ်..
ခေတ်နဲ့ အခြေအနေကို ထည့်စဉ်းစားရမှာ မေ့သွားတာ…ကိုယ့်အကြိုက် ဘယ် ဒီခေတ်ရှိပါတော့မလဲ လေ……..
Wow! so many commets.
Halo! Mr. Headman ( Thu gyee min khin byar).. pls makeaspecial “post” after collecting these all comments.
ဒီမယ် အမိ ဒေါ်လုံးလုံး ကျုပ်ကလူဆိုး… ခင်ဗျာလေးပြောတာ နဲနဲများလွန်သလားလို.ဗျ။ ဒီဆိုဒ်မှာက အတွေးအခေါ်၊ ဗဟုသုတ နဲ. တခြားပညာရမယ်. စာတွေကိုပဲရွာထဲမှာရှိနေစေချင်ဗျာ။ ဘာမဟုတ်တဲ. ၊ ဘာကိုရည်ရွယ်မှန်းမသိ၊ ဘာကိုသိစေချင်မှန်းမသိတဲ. ဟာကိုလာတင်တော. ပျော်တတ်တဲ.။ နောက်တတ်တဲ. ရွာကလူတွေက ပြောရင်လူဆိုးဖြစ်ရော။ နာမည်ကြီးချင်ရင် ညီမလေး မိုးဟေကို ကိုသာသွားမေး၊ အကြံတောင်းလိုက်။ ကဲ ကျုပ်ထပ်ပြောမယ် .. . ဘာကိုသိစေချင်တာလဲ အမိက။ ရွာထဲကလူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားရော ကျုပ်ရော လေးစားသင့်.တဲ.သူတွေရှိတယ်ဗျ။ စကားပြောနဲနဲ စည်း၇ှိပါဗျာ.. နော
ဒီမှာ ကိုလူဆိုး လွန်ရင်လည်း လွန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ … မိုးဟေကို ဘယ်လိုနမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတာ သေချာမသိတဲ့အတွက် သေချာသိတဲ့ ကိုလူဆိုးကပဲ …ပြောပြပါဦး … ဒီမှာ ကျွန်မကလည်း ထပ်ပြောလိုက်မယ် … အဓိကကလက်ခံဝေဖန်ပေးပါလို့ပဲပြောထားတာ… ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမပါဘူး။ အားလုံးကိုလေးစားလို့ပဲလေးလေးစားစား တင်ပြဝေဖန်ခိုင်းထားတာပဲ … လေးစားသင့်တဲ့လူတွေရှိသလို မလေးစားသင့်တဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတာပဲ…ဒီမှာပြောင်ချင်နောက်ချင်ရင်တော့ ဇာတ်ထဲသွား … ဟောက်ချင်ရင်တော့ စပယ်ယာလုပ် … … နောက်ထပ်လည်းပြောလိုက်ဦးမယ် … MG ကနေ မကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်မယ်လို့ ပြောတာ MG ကလူကိုယ်တိုင်ပဲ…. အကုန်လုံးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်တာကို အပေါ်ရေးထားတဲ့ comment က အသိသာကြီးပါ…
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူသားတွေရဲ့ အရပ်အမောင်းကို တိုင်းထွာကြည့်ရင်
မသာကာ ရှိလှပါ လေးပေ ကျော်ကျော်ပေါ့
ဖိုမသဘာဝ လင်ယူပြီး သားမွေးဘို့
အရမ်းလှပါတယ် … လက်ခံပါတယ် …. လူကြီးစုံရာနဲ့ လာတောင်းလှည့်ပါလို့ ….. တစ်သက်လုံးအိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းပါ့မယ်လို့ ….. လက်ခုပ်တီးပေးမယ်နော် ….. ဖျောင်း ဒိုင်း
မင်းအောင်နဲ့တော့ မပေါင်းချင်ဘူးတဲ့ ..
အိုအောင် ဆိုတဲ့ အဘိုးကြီးရဲ့ ဘဏ်စာအုပ်မှာ ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ .. နောက်ကြောင်း ရှင်းလား .. အသက် (၉၀) ကျော်ပြီလား .. ကောင်မလေးကိုယ်စား မေးကြည့်တာ ..
She’s Cute, I like these photos.
Thanks4sharing Sis.
ထင်တာကတော့ mr.lone ဆိုတဲ့သူက သူ့ပုံသူတင်ထားတာပါ။
ုခုခေတ်ကြီးမှာ သူများကိစ္စကို ကိုယ့်ကိစ္စလုပ်ပြီး အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး လုပ်ပေးမယ့်သူမရှိပါ။
ဟုတ်လား တို့ပုံကိုကြည့်ချင်ရင် mr.lone25@gmail.com မှာကြည့်နိုင်တယ်… ချောအိကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ khinesanditheinlwin@gmail.com မှာကြည့်နိုင်တယ်…
ချောအိ ဆိုတဲ့ နံမည်အတိုင်း ချောလိုက်တာဗျာ အသားအိမအိတော့မသိသေးဘူး နံမည်နဲ့ လူနဲ့ လိုက်တယ်ဗျာ
အာရက္ခ မြေသား says:
ကျွန်တော် တော့ကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်ခုံလာပီ။ဂလု. ဂလု။စမောလေး။
Beauty is art. Ethic is better than beauty.
Knowledge is more better than beauty.
let me ကွန်တင်းနြူး….
Contact gets better than knowledge.
Money weigh heavier than contact.
Power is greater than money.
Love conquer everything until..
Lust take in charge….။ :eek:
အသားကုန် ၀ိုင်းမန့်ထားကြတာပဲ …
ဒါ့ပုံ အသစ်ရိုက်မယ်ဆို တား ကိုဆက်သွယ်ပါ…
မျက်တောင်မခတ်တဲ့ မော်ဒလယ်တွေ ရိုက်တဲ့ မှော်အောင်ထားတဲ့ လက်မရွံ့ ဒါ့ပုံဆြာ တို့
သော့ခလောက်လိုက်ရှာနေတဲ့ စိန်တံဆိပ် ဒါ့ပုံဆြာတို့
မည်းမည်းလေးလည်း ချောပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒါ့ပုံဆြာတို့ ကိုရှောင်ပါလို့ ……